ဟီဂွါအင်နေရာမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက ထွက်ခွာမယ့် ဆွာရက်ဇ်ကို အစားထိုးရန် စဉ်းစားနေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်နည်းပြပီယာလို – Myan Ball
ဟီဂွါအင်နေရာမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက ထွက်ခွာမယ့် ဆွာရက်ဇ်ကို အစားထိုးရန် စဉ်းစားနေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်နည်းပြပီယာလို
ဂျူဗင်တပ်စ်နည်းပြ ပီယာလိုဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ထွက်ခွာမယ့် ဆွာရက်ဇ်ကို ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Goal . com သတင်းဌာနက အဆိုအရ အီတလီစီးရီးအေ ချန်ပီယံအသင်းဟာ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှူးကို အသင်းက ထွက်ခွာမယ့် ဟီဂွါအင်နေရာမှာ အစားထိုးရန် ရည်ရွယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွာရက်ဇ်ကို မေဂျာလိဂ်ကလပ် အင်တာမီယာမီ နဲ့ အသင်းဟောင်း အေဂျက် တို့ကလည်း ဆက်သွယ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာစီလိုနာနည်းပြသစ် ရော်နယ်ကိုးမန်းက အသင်းရဲ့ နောက်ရာသီအစီအစဉ်မှာ ဆွာရက်ဇ်မပါဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူးကို ဥရောပက အသင်းတော်တော်များများ ကမ်းလှမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်က လီဗာပူးလ်အသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ဆွာရက်ဇ်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ တတိယဂိုးအများဆုံး သွင်းထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ နဲ့လည်း အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကြယ်ပွင့် မက်ဆီကလည်း အသင်းကနေ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ထွက်ခွာခွင့်ရရန် တောင်းဆိုထားပါတယ်။ မက်ဆီကို ခေါ်ယူရန် ဥရောပက အချမ်းသာဆုံးကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ နဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ကပဲ ရေပန်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟီဂြါအင္ေနရာမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းက ထြက္ခြာမယ့္ ဆြာရက္ဇ္ကို အစားထိုးရန္ စဥ္းစားေနတဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္နည္းျပပီယာလို
ဂ်ဴဗင္တပ္စ္နည္းျပ ပီယာလိုဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းကေန ထြက္ခြာမယ့္ ဆြာရက္ဇ္ကို ကမ္းလွမ္းလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Goal . com သတင္းဌာနက အဆိုအရ အီတလီစီးရီးေအ ခ်န္ပီယံအသင္းဟာ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္တိုက္စစ္မွဴးကို အသင္းက ထြက္ခြာမယ့္ ဟီဂြါအင္ေနရာမွာ အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆြာရက္ဇ္ကို ေမဂ်ာလိဂ္ကလပ္ အင္တာမီယာမီ နဲ႔ အသင္းေဟာင္း ေအဂ်က္ တို႔ကလည္း ဆက္သြယ္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘာစီလိုနာနည္းျပသစ္ ေရာ္နယ္ကိုးမန္းက အသင္းရဲ႕ ေနာက္ရာသီအစီအစဥ္မွာ ဆြာရက္ဇ္မပါဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ ဥရုေဂြးတိုက္စစ္မွဴးကို ဥေရာပက အသင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကမ္းလွမ္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္က လီဗာပူးလ္အသင္းကေန ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ ဆြာရက္ဇ္ဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ တတိယဂိုးအမ်ားဆံုး သြင္းထားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး အသင္းရဲ႕ အဓိက တိုက္စစ္မွဴး မက္ဆီ နဲ႔လည္း အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။အာဂ်င္တီးနားၾကယ္ပြင့္ မက္ဆီကလည္း အသင္းကေန အလြတ္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႔ ထြက္ခြာခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ မက္ဆီကို ေခၚယူရန္ ဥေရာပက အခ်မ္းသာဆံုးကလပ္အသင္းေတြျဖစ္တဲ့ ပီအက္စ္ဂ်ီ နဲ႔ မန္စီးတီးအသင္းတို႔ကပဲ ေရပန္းစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဝါရင့်နောက်ခံလူ သီယာဂိုဆေးလ်ဗားကို အပြီးခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်း
ဟယ်ရီကိန်းအတွက် အရန်အဖြစ် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်တိုက်စစ်မှူး ဒီယေဂိုကော်စတာကို ခေါ်ယူဖွယ်ရှိနေတဲ့ မော်ရင်ဟို
ဆလီဘာနဲ့ ဂါဘရီရယ်တို့လို လူငယ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ ဒေးဗစ်လုဇ်နဲ့ တွဲကစားခွင့်ရတာ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောခဲ့ တဲ့ အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာ
အသင်းအတွက် ပထမဆုံးကစားခွင့်ရတဲ့ပွဲမှာ လက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဟန်ဒါဆန်ကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား
စပါးကွင်းလယ်လူ ဒယ်လီအလီကို ၁၂ လ အငှားနဲ့ ခေါ်ယူရန် ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်း